Shirkadda Airbus oo naqshadeysay nooc cusub oo diyaarad ah - Worldnews.com
Diyaaradda ayaa loo nashaqadeeyay si ka duwan muuqaalka diyaaradaha caadiga ee hadda dunida laga isticmaalo, waxayna leedahay baalal dhaadheer oo gadaal u
"Shirkadda Airbus waxay maalgelineysaa sidii looga faa'ideysan lahaa teknoljiyadda casriga ah ee dunida ku soo kordheysa, si ay hormuud ugu noqoto duulimaadyada mustaqbalka,"
Ilma yar oo si la yaab leh ugu dhex dhashay diyaar hawada ku jirtay
Diyaarad ay leedahay Qatar Airways oo ka soo duushay Magalaada Doxa kuna sii jeeday Bangkok, ayaa la kulantay arrin nadir oo ay adag tahay in lagu arko duulimaadyada...
BBC News 2020-02-06
Ingiriiska oo doonaya in Shiinaha uu u dhiso tareen cusub
Dowladaha Shiinaha iyo Ingiriiska ayaa yeeshay wadahadal horudhac ah oo ku aadan in xukuumadda Beijing la siiyo qandaraaska dhismaha khadka tareenka HS2 ee aadka u...
BBC News 2020-02-17
Sida ku qoran bogga Aqalka Cad ee dalka Mareykanka, diyaaradda khaaska ah ee Madaxweynaha Mareykanka ee loo yaqaano Air Force One waa diyaarad u diyaarsan in ay u safarto...
Shirkadaha duulimaadyada khaaska ah ayaa sheegay inay aad u bateen dadka wax ka weydiinaya diyaaradaha sida gaarka ah loo kireysto tan iyo markii uu dillaacay xanuunka...
BBC News 2020-02-18
Diyaarad saddex qeybood u kala go\_'day xilli ay ka soo caga-dhiganaysay Stanbul
Diyaarad rakaab ayaa ka baxday dhabaha ay diyaaradaha ka haadaan islamarkana u kala go'day saddex qaybood, xilli ay ka soo caga dhigabaysay garoonka diyaaradaha ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Saraakiisha dalkaasi ayaa waxay sheegeen in dhacdadaasi uu hal qof ku dhintay islamarkana ay ku dhaawacmeen 139 qof. Diyaaradan laga lahaa shirkadda diyaaradaha ee Pegasus ayaa...
Diyaarad rakaab \_'ah oo gantaal lagu riday iyadoo loo maleynayo inay Israa\_'iil leedahay\_'
Diyaarad rakaab ah oo ku duuleysay dalka Suuriya ayaa lagu khasbay inay khadka baddalato ka dib markii uu aad u sigay gantaal lidka diyaaradaha ah oo ay ku rideen ciidanka difaaca hawada ee dalkaas, sida ay shaacisay wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka. Warbaahinta ruushka oo soo xiganeysay saraakiil dhinaca difaaca ah ayaa sheegay in diyaaraddaas ay damacsaneyd inay ka caga...
Duufaanta Ciara oo u fududaysay diyaarad inay samayso rikoor duullimaad
Khubarada duullimaaddada ayaa hadal haya, duulimmaadkii British Airways, oo ahaa safarkii hawada ee ugu dhakhasaha badnaa ee laga tago New York, iyadoo lagu wajahan yahay London, iyadoo lagu safrayo diyaarada guuxooda ka gaabiya. Diyaaradda Boeing ee nooceedu yahay 747-436, ayaa ku gaadhay xawaare 825 mph (1,327 km/h) maadddaama ay qayb ka ahayd riixidda duufaanta Ciara. Afar...
Soomaaliya oo ku dhawaaqday xaalad degdeg ah ayax awgii
Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo ku aaddan ayaxa, xilli cayayaankaasi uu si ba'an u saameeyay deegaanno ka tirsan Bariga Afrika. Wasiirka beeraha iyo waraabka Soomaaliya, Siciid Xuseen Ciid, ayaa BBC-da u sheegay in ayaxa oo ku degay deegaanno badan oo dalka ah uu khatar ku yahay wax soo saarka beeraha ee wadanka. Waxaa jira walaac ku aaddan in...
Ilaalo ra\_'iisul wasaare oo loo eryay in uu hub kaga tegay suuli diyaaradeed
LONDON, UK – Booliska UK ayaa xaqiijiyey in sarkaal laga xayuubiyey howlihii loo idmaday isla markaana baaris lagu sameynayo kadib markii ay soo baxdey in uu qorigiisa kala tegay suuli diyaaradeed. Sarkaalka ayaa lagu waramayaa in uu xiligaas waardiye u ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska, David Cameron. Bastooladaas oo la tilmaamay in ay ku jireen 24 xabadood ayaa...
Jeneral Haftar oo joojiyey duulimaadyadii Qaramada Midoobay
Ciidamada daacadda u ah Khalifa Haftar ayaa joojiyay duulimaadyada diyaaradaha sida shaqaalaha Qaramada Midoobe ee ku socda iyo kuwa ka baxaya dalka Libya, taasi oo dhaawacaysa dadaallada bani’aadanimo iyo kuwa dhexdhexaadineed ee socday, sida uu sheegay xafiiska howlgalka Qaramada Midoobe ee dalka Libya. Bayaanka ka soo baxay xafiiska Qaramada Midoobe ayaa lagu sheegay in...